Etu esi enweta akaụntụ azụmahịa na Instagram | Gam akporosis
Eleghị anya ị nwere profaịlụ Instagram, nke ị na-eji dị ka akaụntụ nkeonwe gị. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị bụ onye na-ese ihe, ma ọ bụ nwee azụmahịa nke gị, ọ ga-ekwe omume ịtụgharị ya na akaụntụ azụmahịa na-atọ gị ụtọ. N'ụzọ dị otú a, ọ dị iche na akaụntụ nkeonwe, n'ihi na anyị ga-enwe ike ịnweta data nke anyị agaghị enwe ike ịmata n'ụzọ ọzọ.
Akaụntụ azụmahịa, nke ndị ọchụnta ego, ndị a ma ama, na ọtụtụ ndị ọzọ na-eji, na-enye anyị ohere ile ọnụ ọgụgụ. Instagram na-eme ka anyị mara banyere ndị na-eso ụzọ anyị nwere, ihe nwere ike ịmasị mgbe ị na-ebugote posts na akaụntụ ahụ. Kedu ka ị si gbanwee na akaụntụ azụmahịa?
Tozọ iji mezuo nke a dị mfe, dị mfe karịa inwe ike nyochaa akaụntụ anyị, nke bụ usoro dị ogologo karị. Anyị ga-abanye na Instagram wee banye profaịlụ anyị. N'ime ya, anyị pịa akara atọ dị larịị nke gosipụtara n'akụkụ aka nri dị elu na mgbe ahụ, anyị pịa ntọala.
N'ime nhazi anyị ga-eme naanị chọọ akụkụ a na-akpọ «Gbanwee na akaụntụ azụmahịa». Nke a bụ ngalaba na-amasị anyị n'okwu a na nke anyị ga-enwe ike ịmalite usoro ahụ dum. Ya mere, anyị tinye ya na ngwa ahụ.
Lee, anyị ga - ebido usoro ịtụgharị akaụntụ Instagram anyị na azụmahịa. Ngwa ị ga-agwa anyị ka anyị mejupụta ụfọdụ ozi, na ụdị akaụntụ anyị chọrọ, dabere na ọrụ anyị na-arụ. Ya mere, anyị ga-ejuputa ozi a n'ụzọ dị mfe.
Ozugbo anyi juputara n’ọhịa niile nke Instagram jụrụ anyị, anyị nwere akaụntụ azụmahịa na ngwa ahụ. Ekele ya, anyị ga-enwe ohere ịnweta ọnụọgụ na ndị ọrụ, wee mekwaa omume dịka ịmepụta nkwalite na profaịlụ anyị, ka anyị wee nwee ike ire ma ọ bụ nwekwuo ndị na-eso ụzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu esi gbanwee akaụntụ Instagram gị na akaụntụ azụmaahịa